‘बिरामी भेट्न जादा फलफुल होईन खाम’ — News of The World
पुष्पलाल पाण्डे फागुन ७, २०७४
फलफूल बोकेर बिरामी भेट्न हतार हतारमा कुद्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो विषय अनौठो लाग्न सक्छ । हो पनि हामी बिरामी भेट्न जादा रित्तो हात जादैनौ । फलफुल, जुस, वा हर्लिक्स केहि न केहि बोकी बिरामी भेट्न जानु हाम्रो चलन नै हो ।
तर यही चलन सँगै हामीले लगेका फलफुल, जुस वा पावर ड्रिंक्स बिरामीको लागि उपयुक्त छन ? त्यता तिर भने हाम्रो ध्यान गएको हुदैन । कति फलफुल वा ड्रिंक्स बिरामीलाई खुवाउन उपयुक्त नै हुदैनन् तर पनि हामीले बिरामी भेट्न जादा यी चिज बोकेर जान्छौँ ।
अस्पतालको ¥याक भरि यस्तै चिजले भरिएको समेत हामीले देखेका छौ । शुभेच्छुक, सुभ चिन्तक, वा आफन्तलाई नै हो हामी अस्पतालमा भेट्न जाने । तिनै आफन्तलाई भेट्न जादा हामी कोशेलीको रुपमा केहि न केहि लिएरै जान्छौँ ।
हामीले कोशेलीको रुपमा लिएर गएका ति वस्तुहरु आत्मीयजन विरामी परेर तनावमा रहेका बिरामीका स्वजनहरुले समेत उपयोग गर्न सकिरहेका वा भ्याईरहेका हुदैनन् । निश्चित समय भित्रमा उपयोग नगरएिका त्यस्ता वस्तुहरु कुहेर, सडेर जाने सम्भावना रहन्छ ।
हामीले कोशेली पातको रुपमा लगेका यस्ता वस्तु विरामीले उपयोग नगर्ने, तनावमा रहेका आफ्न्तले प्रयोग गर्न विर्सने वा नभ्याउने हुदाँ हामीले लगेका कोशेलीपात फोहोरको डंगुरमा परिणत हुन्छन् । ती कोशेलीपातको लागि हामीेले पहिल्यै नै पैसा खर्च गरिसकेका हुन्छौँ । यसरी हेर्दा हामीले हाम्रा स्वजनका लागि खर्चिएको रुपियाँ उपयोगमा नआई यतिकै सडेको देखिन्छ । सँगसँगै हाम्रा स्वजन जो बिरामी परेका छन ती सबै अर्थिक रुपमा सबल हुन्छन् भन्ने पनि त छैन । रोगको पिडाले बिरामी अस्पतालको शैयामा छटपटाउने र रोगीको उपचारको लागि खर्चिनु पर्ने ठुलो खर्च र त्यसको व्यवस्थापनमा आफन्त तड्पिनु पर्ने हामी सबैको व्यवहारिक अनुभव हो ।
अझ हाम्रो जस्तो सुलभ स्वास्थ्यको पँहुच नभएको, स्वास्थ्य विमामा समेत थोरै नागरिकको मात्र पँहुच भएको हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रा आफन्त जन वा स्वजन बिरामी पर्नु भनेकै बारीको टुक्रो, घरको बुकुरो बेच्नु पर्ने बाध्यता सृजना हुनु हो ।
एकातिर हामीले कोशेली पातको रुपमा लगेका फलफुलको उपयोग नभएर फोहोरको रुपमा फाल्नु पर्ने अवस्था छ अर्काे तिर आफन्त बिरामी परेका हाम्रा स्वजन क्रृण गरेर आफन्त जनको उपचार गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । राज्य पहुँचवालको लागि मात्रै हो । गरिब र निमुखाले राज्यबाट उपचार सेवा प्राप्त गर्नु र आकाशको फल जमिनमा झर्नु उस्तै हो ।
हाम्रो जस्तो सत्ता शासकहरुको निजि पेवा भएको देशमा सर्वसाधरण कि त रोग पालेर ऐया ! आत्थु ! गरेर बाच्नु पर्छ कि त मृत्युको बाटो रोज्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा निम्छरो नै सहि समाधानको बाटो हुन सक्छ ।
‘बिरामी भेट्न जाँदा खाम अभियान’
बुटवलका मुक्ति पौडेलले सुरु गरेको यो अभियान, हामी सबैले अनुशरण गरे बिरामीको उपचारमा सहजिकरण गर्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा जन्म दिन, बैबाहिक वार्षिकी, मृतकका आफन्तजनको सम्झनामा वा खुसीयालीमा अस्पतालका बिरामीलाई फलफुल बाढ्ने चलन खुब फस्टाएको छ । यसैलाई पौडेलले नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । ‘बिरामी भेट्न जाँदा खाम भन्ने अभियान’ । उनको यो अभियान साच्चिकै सरहानीय छ । हामीले फलफुल, लगायतका वस्तु खरिद गर्दा निश्चित मुल्य तिरेकै हुन्छौँ । त्यो रुपिया जोगाएर त्यसमा केहि थपेर बिरामीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके बिरामीका आफन्तलाई पनि भरथेग हुने, बिरामी परेका हाम्रा स्वजनको उपचारमा हाम्रो पनि साथ र सहयोग रहने देखिन्छ ।
त्यसैले बिरामी भेट्न जाँदा फलफुल, वा अरु खाद्य पदार्थ बोकेर जानुभन्दा खाम बोकेर जाँउ र बिरामी र आफन्त जनको पिडामा सानो समर्पण गरौँ ।